Glass griin haus, Multi-adịru griin haus, Smart griin haus - Hanyang
Qingzhou Hanyang griin haus Project Co., Ltd amalite site Qingzhou Xianke Mechanical Device Co., Ltd iji izute mkpa nke mmepe nke ngwaahịa. Qingzhou Xianke Mechanical Device Co., Ltd e guzobere na 2010, ọ na-e-ewepụtara na imewe, nnyocha na n'ichepụta nke si na greenhouse engineering na ájá Ngwuputa machinery.After ọtụtụ afọ nke mmepe, ọkachamara mmepụta na-ewu, na 2016 anyị ụlọ ọrụ tọrọ ntọala enyemaka ụlọ ọrụ Qingzhou Hanyang griin haus Project Co., Ltd, Hanyang agriculture specializes na griin haus imewe, mmepụta, ewu, cultivation na mgbe-ire ọrụ.
The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ihe karịrị 15000 square mita, na imewe ogbako akụkọ ihe abụọ n'ụzọ atọ nke dum ebe. Imewe ogbako a kwadebere n'ụzọ zuru ezu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ dị ọcha na idozi. Ugbu a ụlọ ọrụ guzobere mmepụta ngalaba, pesonel ngalaba, ahịa ngalaba, R & D ngalaba, imewe ngalaba, ịzụta ngalaba na ndị ọzọ na ngalaba. Office pesonel ogologo oge mụ na gburugburu 20 ndị mmadụ, 15 technical engineer, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-anụ maka a ogologo oge karịa 50 ndị mmadụ, na-ewu pesonel 108 ndị mmadụ, ọtụtụ ndị ọkà oru ọrụ na aku ọrụ a ọtụtụ afọ .
Mgbe ọtụtụ afọ nke ime ihe na-eme nnyocha, anyị na-eji ndị magburu onwe ngwaahịa mma na mgbe-sales ọrụ iji merie ahịa na iru a anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na ahịa. N'ihi ya, anya, anyị na ngwaahịa na-ere ihe karịrị 30 anāchi achi, municipalities, na kwurula na mpaghara, na ihe ịga nke ọma exported na Russia, India, South Africa, Vietnam, Bangladesh, Singapore, Nigeria, Kenya, Togo, Congo na mba ndị ọzọ na mpaghara. Anyị natara a obosara tokwara ma guzosie ike ruo ogologo oge nkwado mmekọrịta anụ ụlọ na esenidụt ahịa.
The ngwaahịa, nke kacha mma mma ọrụ, lowset price, HanYang ga-eme ka ndị ọzọ mma gị yad, anyị ga-enwe obi ụtọ na ọrụ ị na, ị na-nnọọ ka ịkpọ.